Okufanele Ukwazi Ngamakhodi Ophuthumayo Womkhumbi Ohamba Ngemikhumbi | Izikebhe ze-Absolut
Okufanele ukwazi ngamakhodi ophuthumayo ku-cruise
Namuhla sifuna ukukhuluma nawe ngamakhodi aphuthumayo omkhumbi we-cruise. Imayelana ne- ulimi, okucishe kube nokuqonda okuyimfihlo nokuyimfihlo, okwaziswa ngalo izisebenzi ngalokho okwenzekayo emkhunjini. Lezi amabinzana noma amagama kuthiwa benziwa ngohlelo lwamakheli omphakathi, ngakho-ke ukuze bangexwayisi abagibeli, banayo le khodi. Iqiniso lokuthi abasebenzi abasebenza ngokugcwele akudingeki lisho ukuthi kunokuthile okubucayi okwenzekayo, kungenzeka nje ukuthi indawo kumele ihlanzwe noma ukuthi kukhona oqulekile. Angamagama nemishwana ayisebenzisayo, kepha uzojwayela ukuwezwa uma ungumgibeli ohamba ngesikebhe wangempela.
Ungaqagela kanjani lawa makhodi ziyaziwa yibo bonke abasebenzi. Izinkampani zemikhumbi ziphethe ukuqeqesha abasebenzi bazo kuzo, ilungu ngalinye labasebenzi linendima eliyabelwe, ngakho-ke uma uhlela ukusebenza emkhunjini wokuhamba ngezikebhe, unentshisekelo yokufunda le ndatshana.
1 Shiya ikhodi yomkhumbi
2 Ikhodi yokwazisa ukuthi othile uwele olwandle
3 Ikhodi yomlilo
4 Amanye amakhodi okuphuthumayo
Shiya ikhodi yomkhumbi
Usuku lokuqala lokugibela ngu ukubhola okuphuthumayo okumele wonke umuntu, yebo noma yebo, aye kukho. Kufanele uye emhlanganweni endaweni abayikhombisile, kuya ngokuthi ikuphi ikhabethe lakho futhi unake kakhulu lapho. Phakathi kwezinye izinto ezibalulekile, bazokuchazela lapho kuzodingeka ushiye khona umkhumbi, ugqoke ijakhethi yakho yokuphila noma yiziphi izikebhe zokuphila ezihambelana nawe. Futhi wazi kanjani ukuthi kufanele uqale ukukhipha? Yebo, kuzo zonke izindawo Ama-beeps amafushane kanye ne-beeps eyodwa ende kuzozwakala. Khumbula, ama-beeps ama-7 amafushane no-1 ubude, yebo kuyezwakala nasemakamelweni. Ukusuka lapho kuzofanele ulandele imiyalo abakunike yona ngosuku lokuqala.
Ikhodi yokwazisa ukuthi othile uwele olwandle
Uma ubona umuntu ewela olwandle into yokuqala ithi yazisa abasebenzi nokuthi uyazama khumbula imininingwane ephezulu ngalokho okwenzekile. Bazokwazi kahle ukuthi benzeni.
Ikhodi ye-morse u-Oscar ukukhombisa ukuthi kukhona "umuntu olwandle" futhi ngokunokwenzeka uhlelo lwamakheli omphakathi luzobiza uMnu. Bob, nansi indlela yekhodi lapho iCaribbean nePrincess kufanele bathi khona umuntu owela olwandle. Ngaphandle kwalokhu uzozwa ama-beeps ama-3 amade nensimbi ende.
Lapho othile ewela emanzini, yonke imizamo igxile ekuyibuyiseni, ngakho-ke imishini iyama ne-alamu iphakanyiswa. Ngakusasa, noma ngalo lolo suku, ukaputeni uhlela umhlangano echaza ngokwenzekile. Into esemqoka ukugwema amahemuhemu.
Uma ufuna eminye imininingwane ngalesi sihloko ungabonisana Lesi sihloko.
Ukuvela komlilo ngesinye sezimo ezimbi kakhulu ezingenzeka lapho usemkhunjini wokuhamba ngesikebhe. Lokhu akudingeki ukuthi kube kubi, kepha kufanele kulawulwe kusukela kumzuzu wokuqala. Uma uhamba ngesikebhe IDisney futhi uzwa kathathu: Amaphathi abomvu, amaqembu abomvu, amaqembu abomvu, kulandelwa indawo lokhu ukuthi kunomlilo kuleyo ndawo.
Amanye amakhodi okuphuthumayo
Kepha umlilo noma othile owela olwandle akuwona amakhodi ajwayelekile, kepha izimo ezincane noma izingozi ezimenyezelwe ngokusobala ngohlelo lwamakheli omphakathi zingadala ilukuluku nelukuluku, okungeyona indlela ephumelela kakhulu yokuxazulula inkinga. Kungakho imikhumbi iqhubeka nokugcina le khodi ebethelwe, ngokwesibonelo ICode Blue, noma i-Alpha kuthiwa ngezimo eziphuthumayo zezokwelapha.
Un 30-30 kanye nendawo eyodwa kukhombisa ukuthi abasebenzi be- ukuhlanza futhi, noma, isondlo kufanele sinakekele isimo esiphuthumayo endaweni ekhonjisiwe. I-Echo, i-Echo, i-Echo (efundwa ngesiNtaliyane) ungene eRoyal Caribbean kusho ingozi yokushayisana nomunye umkhumbi.
Lawa ngamakhodi ajwayelekile kakhulu, kepha njengoba sishilo ekuqaleni, inkampani ngayinye yokuhambisa "inokhiye bayo". Okungashintshi ukuthintwa okufushane okungu-7 futhi kukude ukushiya umkhumbi.
Ilukuluku mayelana nemalogo yenkampani yokuthumela
Indlela ephelele ye-athikili: Izikebhe ze-Absolut » General » Okufanele ukwazi ngamakhodi ophuthumayo ku-cruise
Ungayingenela kanjani i-cruise ethekwini
Amathiphu wokungaguli lapho uhamba ngomkhumbi futhi ukujabulela ngokugcwele